विजनेश – Page 10 – सप्तरंगी एफ एम
Home / विजनेश (page 10)
सुनचाँदी व्यवसायी संघ झापको अध्यक्षमा पुनःरुपदल विश्वकर्मा निर्वाचित
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ ८/ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ झापाको दोस्रो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः रुपदल विश्वकर्मा राजु निर्वाचित हुनु भएको छ । गएराती अवेर बिर्तामोडमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार एक सय २६ मत प्राप्त गर्दै राजु निर्वाचित हुनु भएको हो । अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी गोपाल ल्वागुनले ३३ मत मात्रै प्राप्त गर्नु भयो । अन्य सम्पूर्ण पदमा भने निर्विरोध निर्वाचित भएका ...
दमक वडा नम्बर ४ ताराबारीमा रहेको होटल वन्डरल्याण्ड आगामी भदौ १ गते बाट पुनः सन्चालनमा आउने
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन ३०/ दमक वडा नम्बर ४ ताराबारीमा रहेको होटल वन्डरल्याण्ड आगामी भदौ १ गते बाट पुनः सन्चालनमा आउने भएको छ । होटलमा केहि प्राबिधि उपकरण जडान गर्नु पर्ने भएकोले गत साउन ६ गते देखी होटल बन्द गरिएको होटलका प्रबन्ध निर्देशक बिदुर लामाले जानकारी दिनुभयो । बन्द होटल पर्सि भदौ १ गते सुक्रबार बाट पुनः सञ्चालन हुने गरि तयारी ...
गौरादहका व्रोइलर कुखुरा पालक किसान संगठित
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २८/ झापाको गौरादह नगरपालिका भित्रका व्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानहरु संगठित भएका छन् । नगरपालिका भित्र रही व्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानहरुलाई आइपर्ने समस्याहरुको समाधान गर्न व्रोइलर पालक किसान संघ गौरादह नगर समिति गठन गरिएको छ । गौरादह नगरपालिका वडा नं. ७ को सभाहलमा आज भएको किसानहरुको भेलाले भुपाल सिंह ताजपुरियाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यिय समिति गठन गरेको छ । ...
एकिकृत सहकारी खेतीले उत्पादन गरेको १५ लाख रुपयाँ मुल्य बराबरको मकै खेर जाने अवस्थामा
सप्तरङ्गगी एफ.एम. दमक/साउन २७/ झापाको नमूना एकिकृत सहकारी खेतीले उत्पादन गरेको करिव १५ लाख रुपयाँ बराबरको मकै त्यतिकै खेर जाने अवस्थामा थन्काएर राख्नु परेको छ । बजार मूल्यको अभाव र बर्षाका कारण सुकाउन नसकेर मकै थन्काइएको हो । समयमा सुकाउने र विक्री नगर्ने हो भने ठूलो परिमाणको मकै त्यतिकै कुहिएर खेर जाने कृषकहरुले बताएका छन् । नेपालकै नमूनाको रुपमा रहेको ...
एशियन लाईफ बाट मृत्यु दाबी भुक्तानी
सप्तरङ्गगी एफ.एम. दमक/साउन २७/ एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्सको दमक शाखाले झण्डै ८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम मृत्युदाबी भुक्तानी दिएको छ । दमक वडा नम्बर ६ निबासी भारती कुमाल पुलामीको गत फागुन ०३ गते असामहिक मृत्यु भएपछि उहाँका श्रीमान मान बहादुर कुमाल लाई कम्पनीले नियम अनुसार मृत्यु दाबी भुक्तानी रकम उपलब्ध गराएको हो । हिँजो एक कार्यक्रमका विच प्रमुख अतिथी कम्पनीका बरिष्ठ ...
दमक–६ स्थित साधना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सातौ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक साउन २५ , २०७५ दमक–६ स्थित साधना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आज आफ्नो सातौ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । दमक उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा एक कार्यक्रम गरि संस्थाले आफ्नो साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साधारणसभाको उद्घाटनमा संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद गुरागाई (गोपाल) ले अध्यक्षको प्रतिवेदन र लेखा संयोजक विरेन्द्र पौडेलले संस्थाको लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुका साथै ...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा दमकमा
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २४/ दमकमा मुक्तिनाथ विकास वैकले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससंगै देशभरि ९५ वटा शाखा विस्तार भएको बैंकले जनाएको छ । दमक चौंकमा आजदेखि औपचारिक रुपमा शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोख्रेलले बताउनुभयो । दमक शाखाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले आज एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनसंगै बैंकले दमकमा आप्mनो कारोवार सञ्चालनमा ...
दमक पब्लिक लाईब्रेरीको उद्यमशिल बहसको भोली हुने तेस्रो सृङखलामा सफल उद्यमी भास्करराज राजकर्णिकार सहाभागी हुने
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन १८/ दमक पब्लिक लाईब्रेरीले सुरु गरेको उद्यमशिल बहसको तेस्रो सृङखला भोली हुने भएको छ । भोलीको उद्यमशिल बहसमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व उपाध्यक्ष तथा सफल उद्यमी भास्करराज राजकर्णिकार सहाभागी हुनुहुने भएको छ । हरेक महिनामा गरिने एक कार्यक्रममा सफल उद्यमी संग कुराकानी हुने लाईब्रेरीका अध्यक्ष भेषराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । युवाहरुलाई उद्यमशिल बनाउनको लागी यस प्रकारको ...